Nicolo Barella oo hal sabab u diiday kooxda Chelsea oo bishii Janaayo kula soo saxiixan lahayd 57 milyan oo dollar! – Gool FM
Nicolo Barella oo hal sabab u diiday kooxda Chelsea oo bishii Janaayo kula soo saxiixan lahayd 57 milyan oo dollar!
(London) 07 Feb 2019. Sida wararku ay sheegayaan Nicolo Barella ayaa iska diiday inuu ku biiro kooxda Chelsea oo suuqii Janaayo ku soo qaadan lahayd adduun dhan 57 milyan oo dollar.
Warsidaha Tuttomercatoweb ayaa warinaya in laacibkan khadka dhexe ee kooxda Cagliari, Nicolo Barella uu hoos u dhigay dalab dhan 50 milyan oo euro oo u dhiganta 44 milyan oo gini ama 57 milyan oo dollar oo ay kooxda Chelsea ka soo gudbisay bishii la soo dhaafay.
Waxaa warbixinta lagu sheegay in Nicolo Barella uu u diiday ku soo biirista kooxda Blues hal sabab oo ah arrimo qoyskiisa la xiriira.
21-sano jirkaan ayaa si weyn loola xiriirinayey inuu u soo dhaqaaqo Galbeedka Magaalada London bishii Janaayo ee la soo dhaafay si uu bedel ugu noqdo booska uu ka baxay laacibkii khadka dhexe ee Cesc Fabregas oo ku biiray Monaco.
Cagliari ayaa aqbashay dalabka Blues waxaana ay raacdo u gashay sidii ay kooxda Boca Juniors uga soo qaadan lahayd Nahitan Nandez oo ay u aragtay bedelka Barella, laakiin laacibkan khadka dhexe iyo qoyskiisa ayaa door-bidaya inay sii joogaan dalka Talyaaniga.
Barella ayaa la filayaa inuu u dhaqaaqo midkood kooxaha Napoli iyo Inter Milan oo aad u xiisaynaya, maadaama isaga qoyskiisu ay doonayaan inay sii joogaan dalka Talyaaniga.
Macallinka Kooxda Arsenal ee Unai Emery oo doonaya saddex saxiix oo cusub suuqa xagaaga
Ramos oo Dhabarka lagu socodsiiyay Goysmo darteed kulankii Xalay ee El Clasico.....(Bal DAAWO tan ku dhacday)